Sawirro: Shirka dib u heshiisiinta Bulshada Mudug oo Galkacyo ka furmay - Ceelhuur Online
Home > Wararka Galmudug > Sawirro: Shirka dib u heshiisiinta Bulshada Mudug oo Galkacyo ka furmay
September 5, 2017 September 5, 2017 admin436
kulan looga hadlay nabad u helida bulshada ku wada nool gobolka mudug waxaa uu daba socday mid shalay ay madaxda maamulada Galmudug iyo Puntland ku yeesheen garoonka diyaaraha Cabdullaahi Yuusuf ee magaalada Galkacyo. kulanka dib u heshiisiinta ah oo ka dhacay waqooyiga gaalkacyo, waxaa ka qeyb galay madaxda kala duwan ee labada maamul, oo ay ugu horeeyaan labada madaxweyne ku xigeen , qeybo ka mida bulshada rayidka oo ay ka mid yihiin duubabka dhaqanka ee taladooda si wanagsan looga dhageysto deegaanada gobolka mudug .
Odoyaal dhaqameedka ka hadlay kulanka waxaa ay sheegeen inay muhim tahay nabad ay helaan bulshada gobolka mudug oo kasoo daalay dagaalo iyo colaado sokeeye. madaxda galmudug iyo puntland ayaa rajo ka muujinaya inay ku guuleystaan helintaanka nabad gelyo ay kuwada noolaadaan shacabka labada maamul taasina lagu gaari karo is aaminaad iyo wada shaqeyn dhaba.
Madaxweyne ku xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay si dhaba in looga hadlay waxyaabaha saldhiga u ah colaadaha soo laa laabtaan si xal loogu helo. dhigiisa ku xigeenka madaxweynaha Puntland C/xakiin Cumar Camey oo sheegay in badankood dadka ku nool gobolka Mudug ay yihiin dhalyo wadaag, isagoo intaa ku daray in qodobada ugu muhiimsan ee looga hadli doono shirarka dib u heshiisiinta bulshada gobolka mudug ee ka socda gaalkacyo.
Kooxaha Ka Dhisan England iyo Italy Oo Ku Tartamaya Rafinha
Miyuu Arda Turan Ka Tagayaa Barcelona?
Madaxwayne Farmaajo oo kusii jeedaa Ivory Cost
December 19, 2016 Duceysane